Izindlela Ezi-4 Zokufunda Komshini Kuthuthukisa Ukumakethwa Kwemidiya Yezenhlalo | Martech Zone
NgeSonto, uDisemba 20, i-2020 NgeSonto, uDisemba 20, i-2020 Andrey Koptelov
Njengoba abantu abaningi bebandakanyeka ezinkundleni zokuxhumana online nsuku zonke, imithombo yezokuxhumana isibe yingxenye ebaluleke kakhulu yamasu wokumaketha amabhizinisi ezinhlobo zonke.
Kwakunabasebenzisi be-intanethi abayi-4.388 billion emhlabeni wonke ngonyaka we-2019, kanti ama-79% abo babengabasebenzisi bezenhlalo abasebenzayo.
Umbiko Womhlaba Wedijithali
Lapho kusetshenziswa amasu, ukumaketha kwemidiya yezenhlalo kungasiza ekwenzeni imali yenkampani, ukuzibandakanya, nokuqwashisa, kepha ukumane ube semithonjeni yezokuxhumana akusho ukuthi usebenzise konke lokho ezokuxhumana zikugcinele amabhizinisi. Okubaluleke kakhulu yindlela ozisebenzisa ngayo iziteshi zenhlalo, futhi kulapho amathuba angavezwa khona ngokufunda ngomshini.
Sizobhekana nokuqhuma kwedatha, kepha le datha ayinalutho ngaphandle kokuthi ihlaziywe. Ukufunda ngomshini kwenza kube nokwenzeka ukuhlaziya amasethi wedatha angenamkhawulo futhi uthole amaphethini afihliwe ngemuva kwawo. Ngokujwayelekile kufakwa ngosizo lwe abaluleki bokufunda ngemishini, lobu buchwepheshe buthuthukisa indlela idatha eguqulwa ngayo ibe ulwazi futhi inika amandla amabhizinisi ukwenza izibikezelo ezinembile nezinqumo ezisuselwa eqinisweni.
Lezi akuzona zonke izinzuzo, ngakho-ke ake sibheke ngokucophelela ezinye izici zebhizinisi ezingathuthukiswa ngokufunda komshini.
1. Ukuqapha Komkhiqizo / Ukulalela Komphakathi
Ukuphumelela kwezebhizinisi namuhla kunqunywa yizinto eziningi, futhi mhlawumbe enye yezinto ezinomthelela omkhulu kuzo idumela eliku-inthanethi. Ngokuvumelana ne Ucwaningo Lokubuyekezwa Kwabathengi Bendawo, Abasebenzisi abangu-82% bahlola ukubuyekezwa okuku-inthanethi kwamabhizinisi, ngokufunda ngakunye izibuyekezo eziyi-10 ngokwesilinganiso ngaphambi kokuthembela ebhizinisini. Lokhu kufakazela ukuthi ukwaziswa okuhle kubalulekile kumikhiqizo, yingakho abaphathi bedinga ukuthola indlela yokuphatha isithunzi sebhizinisi ngempumelelo.
Ukuqapha umkhiqizo kuyisixazululo esifanelekile, okuwukucinga kwanoma ikuphi ukushiwo komkhiqizo kuyo yonke imithombo etholakalayo, kufaka phakathi imithombo yezokuxhumana, izinkundla, amabhulogi, ukubuyekezwa okuku-inthanethi nezindatshana. Ukuvumela amabhizinisi ukuthi abone izinkinga ngaphambi kokuthi zikhule zibe yizinkinga futhi zenze ngokuhamba kwesikhathi, ukuqapha umkhiqizo futhi kunikeza abaphathi ukuqonda okuphelele kwezilaleli zabo, futhi ngaleyo ndlela kube nomthelela ekwenzeni izinqumo ezingcono.
Ukufunda Komshini Kusiza Kanjani Ukuqapha Komkhiqizo / Ukulalela Komphakathi
Njengesisekelo se-analytics yokubikezela, ukufunda ngomshini kufaka isandla ekuqondeni okuphelele kwabenzi bezinqumo ngazo zonke izinqubo ezenzekayo ezinkampanini zabo, ukuze izinqumo zabo ziqhutshwe kakhulu idatha futhi zigxile kumakhasimende, futhi ngaleyo ndlela zisebenze kangcono.
Manje cabanga ngakho konke okushiwo ngebhizinisi lakho okutholakala ku-inthanethi — zizobe zingaki? Amakhulu? Izinkulungwane? Ukuwaqoqa nokuwahlaziya ngesandla akuyona inselelo ephathekayo, ngenkathi ukufunda ngomshini kusheshisa inqubo futhi kunikeze ukubuyekezwa okuningiliziwe komkhiqizo.
Ngaphandle kokuthi amakhasimende angajabuli axhumane nawe ngqo ngocingo noma nge-imeyili, indlela esheshayo yokuthola nokubasiza iwukuhlaziywa kwemizwa-isethi yamasu wokufunda wemishini ahlola umbono womphakathi mayelana nebhizinisi lakho. Ikakhulu, ukubalulwa komkhiqizo kuhlungwa ngesimo esingesihle noma esihle ukuze ibhizinisi lakho lisheshe lisabele ezimweni ezingathinta umkhiqizo wakho. Ukusebenzisa imishini yokufunda kwenza amabhizinisi alandele imibono yamakhasimende kungakhathalekile ukuthi abhalwe ngaluphi ulimi, okwandisa indawo yokuqapha.
2. Ucwaningo Lwezethameli Ezihlosiwe
Iphrofayili eku-inthanethi ingatshela izinto eziningi, njengobudala bomnikazi wayo, ubulili, indawo, umsebenzi, izinto zokuzilibazisa, imali engenayo, imikhuba yokuthenga, nokuningi, okwenza imithombo yezokuxhumana ibe ngumthombo ongapheli wamabhizinisi wokuqoqa idatha mayelana namakhasimende abo nabantu abangathanda ukumbandakanya. Ngakho-ke, abaphathi bezentengiso bathola ithuba lokufunda ngezithameli zabo, kufaka phakathi indlela umkhiqizo noma izinsizakalo zenkampani ezisetshenziswa ngayo. Lokhu kusiza inqubo yokuthola amaphutha emikhiqizo futhi kuveze izindlela umkhiqizo ongaguqulwa ngazo.
Lokhu kungasetshenziswa nakubudlelwano be-B2B: ngokuya ngemibandela efana nosayizi wenkampani, imali engenayo yonyaka, kanye nenani labasebenzi, amakhasimende e-B2B ahlukaniswe ngamaqembu, ukuze umthengisi angadingi ukuthola usayizi olingana-konke Isixazululo kepha khomba izingxenye ezahlukahlukene usebenzisa indlela efaneleke kakhulu eqenjini elithile.
Ukufunda Komshini Kusiza Kanjani Ukucwaninga Kwezithameli Ezihlosiwe
Ochwepheshe bezokumaketha banenqwaba yemininingwane yokubhekana nayo — eqoqwe emithonjeni eminingi, ingahle ibonakale ingapheli uma kukhulunywa ngokuphrinta kwamakhasimende kanye nokuhlaziywa kwezithameli. Ngokusebenzisa ukufundwa kwemishini, izinkampani zenza lula inqubo yokuhlaziya iziteshi ezahlukahlukene nokukhipha imininingwane ebalulekile kuzo. Ngale ndlela, abasebenzi bakho bangasebenzisa idatha eyenziwe ngomumo ukuncika kuyo lapho behlukanisa amakhasimende.
Futhi, ama-algorithms wokufunda ngomshini angaveza izindlela zokuziphatha zalokhu noma lelo qembu lamakhasimende, enikeza izinkampani ithuba lokwenza izibikezelo eziqonde kakhulu futhi zisebenzise lokho kusizakala kwazo amasu.
3. Ukuqashelwa Kwezithombe Nevidiyo
Ku-2020, ukuqashelwa kwesithombe nevidiyo kuza njengetheknoloji evelayo edingekayo kuzo zonke izinkampani ezifuna ukuba nokuncintisana. Imithombo yezokuxhumana, futhi ikakhulukazi amanethiwekhi afana ne-Facebook ne-Instagram, ahlinzeka ngenombolo engenamkhawulo yezithombe namavidiyo athunyelwa ngabathengi bakho nsuku zonke, uma kungenjalo njalo ngeminithi.
Okokuqala, ukubona isithombe kuvumela izinkampani ukuthi zikhombe imikhiqizo eyintandokazi yabasebenzisi. Njengoba lolu lwazi lucatshangelwe, uzokwazi ukukhomba ngempumelelo imikhankaso yakho yokumaketha ukuze uthengise futhi uthengise uma umuntu evele esebenzisa umkhiqizo wakho, futhi ubakhuthaze ukuthi bazame ngentengo ekhanga kakhulu uma besebenzisa umkhiqizo womncintiswano . Futhi, ubuchwepheshe bufaka isandla ekuqondeni kwezithameli eziqondiwe, njengoba izithombe kwesinye isikhathi zingatshela okuningi kakhulu ngeholo lomuntu, indawo akuyo nezintshisekelo zakhe kunephrofayili engagcwalisiwe kahle.
Enye indlela amabhizinisi angazuza ngayo ekubonweni kwesithombe nevidiyo ukuthola izindlela ezintsha ezingasetshenziswa umkhiqizo wazo. I-inthanethi namuhla igcwele izithombe namavidiyo wabantu abenza izivivinyo futhi benza izinto ezingajwayelekile besebenzisa imikhiqizo ejwayelekile ngendlela entsha ngokuphelele — ngakho-ke kungani ungayisebenzisi?
Ukufunda Komshini Kusiza Kanjani Ukuqashelwa Kwezithombe Nevidiyo
Ukufunda ngomshini kuyingxenye ebaluleke kakhulu yokuqashelwa kwesithombe nevidiyo, okususelwa ekuqeqeshweni okungaguquguquki okungenzeka kuphela ngokusebenzisa ama-algorithms afanele nokwenza uhlelo lukhumbule amaphethini.
Noma kunjalo, izithombe namavidiyo abonakala ewusizo kuqala kudingeka atholakale phakathi kwemininingwane eminingi etholakala ezinkundleni zokuxhumana, futhi kulapho ukufunda ngomshini kusiza ukuthunywa okungenakwenzeka uma kwenziwa ngesandla. Kukhuthazwe ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe bokufunda ngomshini, ukuqashelwa kwesithombe kungakhuthaza amabhizinisi abheke ezingeni elisha ngokuphelele lokukhomba, ukuhlinzeka ngemininingwane eyingqayizivele ngamakhasimende nendlela abasebenzisa ngayo imikhiqizo.
4. Ukukhonjwa kwamakhasimende nokusekelwa nge-Chatbots
Bayanda abantu namuhla ababona ukuthi imiyalezo iyindlela elula kunazo zonke yokuxhumana nabantu, enikeza izinkampani amathuba amasha okubandakanya amakhasimende. Ngokukhuphuka kwezingxoxo ngokujwayelekile nezinhlelo zokusebenza zokuxoxa ezifana ne-WhatsApp ne-Facebook Messenger, izingxoxo zezingxoxo ziba yithuluzi lokumaketha elisebenza kahle-bacubungula imininingwane yazo zonke izinhlobo futhi bangasebenza ekuphenduleni izicelo ezahlukahlukene: kusuka emibuzweni ejwayelekile kuya emisebenzini ebandakanya ukuguquguquka okuningi.
Ngokungafani nezixhumanisi zokuzulazula ezijwayelekile namakhasi ewebhu, izingxoxo ezingxoxweni zinikeza abasebenzisi ikhono lokusesha nokuhlola besebenzisa inethiwekhi yokuxhumana nabantu noma uhlelo lokusebenza lwemiyalezo abalukhethayo. Futhi ngenkathi ukumaketha kwendabuko kwedijithali kuvamise ukusebenzisa izithombe, umbhalo, nevidiyo, ama-bots enza kube lula ukuthi imikhiqizo ixhumeke kumakhasimende ngamunye ngqo futhi yakhe ingxoxo yomuntu siqu efana nomuntu.
Ama-Chatbots Akhuthazwe Ngokufunda Komshini
Iningi lezingxoxo zisebenza kuma-algorithm wokufunda ngomshini. Uma i-chatbot ingumsebenzi othambekele ekusebenzeni, noma kunjalo, ingasebenzisa uhlelo nemithetho yolimi lwe-neuro ukuletha izimpendulo ezihlelekile kuzicelo ezijwayelekile ngaphandle kokudinga ukufundwa komshini ukuxhasa amakhono ayo ayisisekelo.
Ngasikhathi sinye, kukhona izingxoxo zokuxoxa eziqhutshwa idatha-ezibamba njengabasizi abahlakaniphile, bafunda ohambweni lokunikeza izimpendulo nezincomo ezifanele, kanti abanye bangalingisa nemizwa. Izingxoxo eziqhutshwa ngedatha zinikwa amandla ngokufunda komshini, njengoba zihlala ziqeqeshwa, ziguquka futhi zihlaziya okuthandwa ngabasebenzisi. Ngokubambisana, la maqiniso enza ukuxhumana kwabasebenzisi nebhizinisi kube ngokwezifiso ngokwengeziwe: ukubuza imibuzo, ukuhlinzeka ngemininingwane efanele, ukuzwelana, nokuncokola, izingxoxo zengevu zinxenxa okungafinyeleleki kuzikhangiso zendabuko.
Ngama-chatbots ahlakaniphile, amabhizinisi angasiza inani elingenamkhawulo lamakhasimende noma kuphi nanoma nini lapho ekhona. Ukonga imali nesikhathi nokwenza ngcono isipiliyoni samakhasimende, izingxoxo zezingxoxo seziba ngenye yezindawo ze-AI ezizuzisa kakhulu ukutshala imali kumabhizinisi nosayizi ophakathi nendawo.
Tags: aiukuhlakanipha okungekhona okwangempelab2bamaphethini wokuziphathaukuqapha umkhiqizoigama lomkhiqizoukuxoxa ngomshini wengxoxoizingxoxoukukhonjwa kwamakhasimendeubuchwepheshe obuvelayoisimo somhlaba wonke sombiko wedijithaliukuqashelwa kwesithombeukufundwa komshini wokuqashelwa kwesithombeabasizi abahlakaniphileukufunda imishiniukuqapha komkhiqizo wokufunda ngomshiniimishini yokufunda ukulalela komphakathiimishini yokufunda imithombo yezokuxhumanai-analytics yokubikezelaukusekelwa kwamakhasimende kwezenhlaloSocial Media Marketingukuqondiswa kwezinkundla zokuxhumanakhomba ucwaningo lwezethameliukuqashelwa kwevidiyoukufundwa komshini wokuqashelwa ividiyo
Izizathu ezi-5 zabakhangisi be-B2B zokuhlanganisa amabhothi kucebo labo lokumaketha kwedijithali